यो कस्तो प्रेम ? | आरोह अवरोह.....
Posted on Thursday, July 08, 2010 comments (2)
आज उ एक्लो छ, ७ बर्सको लामो माया बिना अर्थ टुटेपछि । साकुराको(साकुरा जापानी केटाको नाम) माया चोखो थियो तर उनको प्रेमिका कुनै बिनाअर्थ साकुरालाई धोका दिन्छिन । कलेज पढदाको उनीहरुको माया लिलामजुनको जोडी जस्तो थियो । कुनै दिन नभेटेको दिन हुन्नथ्यो अनि दिनदिनै फोनमा कुरा नगरेको दिन हुन्नथ्यो माया प्रेमका । साचै त्यसबेला उनीहरुको माया अति चोखो थियो, जुनी जुनी संगै जीउने बाचा कसम गर्थे उनीहरु बरपीपल लाइ साक्षी राखेर । कलेज जादा होस् या कम्पुटर सिक्न जादा सधै संगै हुन्थे । अनि सबैले भन्ने गर्थे "कस्तो मिल्ने जोडी" भनेर ।
समयको बहाब संगै साकुरा युनिभर्सीटीको पढाईको लागि नेपाल जान्छ । र दुइ बीच छुट्टिनुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ । सारै नरमाइलो क्षन हुन्छ दुइजना छुट्टिदाखेरि, दुबैजना आँसु बगाएर रोएकाथिए बिछोडिएको पलमा । बाध्यता, जापानमा अतिम्स एक्लो अनि नेपालमा साकुरा एक्लो । यस्तै यस्तैमा बित्छ दिनहरु दुबैको । कहिले कहिँ फोन बाट मात्र कुरा हुन्छ । साकुरा नेपाल गएको पनि २ बर्ष बित्छ अनि जापान फर्कन्छ एक महिनाको लागि । अनि अतिम्स्लाई भेट्ने कोसिस गर्छ, तर भेट्ने कुनै रहर गर्दिनन , मात्र फोनमा भेटेर चित्त बुझाउन बाध्य हुन्छ साकुरा ।
अनि फेरी साकुरा निराश मन लिएर नेपाल फर्कन्छ । तर, साकुरा अझै पनि उनि संगको माया रहिरहेको कुरामा बिस्वस्त हुन्छ , नेपालबाट फेरी फोन गर्छ , अनि फोनमा अतिम्सले साकुरा लाई नकार्ने कुरा सुनाउछिन , कारण केहि बताउन चाहन्नन यति मात्र भन्छिन "मलाई मेरो परिवारको डर लाग्छ " यो कस्तो प्रेम हो? बिना कारण त्यति लामो प्रेम छिनभरमा चकनाचुर, साकुरा केहि बोल्दैनन निरास हुन्छन अनि आफुले आफैलाई धिक्कार्छन अनि आफुले आफैलाई सोध्छन यो कस्तो प्रेम हो ? यो कस्तो आधुनिक माया हो ?..................
Related Posts : लघु कथा
Very fantastic story, amen.
Prakash Bahadur Chand said...
कस्तो हो यो चोखो प्रेम मान्छेलाई नै पागल बनाईदिने । प्रिया